AGTV သည် Blackmagic ဒီဇိုင်းကင်မရာများကို အသုံးပြု၍ ချီလီရုပ်သံစီးရီး | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » AGTV ချီလီတီဗီစီးရီးထုတ်လုပ်ရန် Blackmagic ဒီဇိုင်းကင်မရာများကိုအသုံးပြု
နောက်ထပ်တစ်ခါ, Blackmagic ဒီဇိုင်း တစ်ဦး Ace ပံ့ပိုးပေးအဖြစ်ကိုယ်နှိုက်ကသက်သေပြခဲ့သည် အရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုထုတ်ကုန်။ အဆိုပါချီလီထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ, AGTV, အသုံးပြုခံ့ Blackmagic ဒီဇိုင်း'' s ကိုခြောက်လ၏အသုံးပြုမှုကိုထည့်သွင်းထားတဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာ, URSA အသံလွှင့်ကင်မရာများကို "သူတို့ထိခိုက်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးထုတ်လုပ်မှုအတွက်a la Catalan Amore" ဘို့ တူးမြောင်း 13, ချီလီအတွက်ဒုတိယအသက်အကြီးဆုံးတီဗီဘူတာရုံ။
Blackmagic ဒီဇိုင်း'' s ကိုကင်မရာများကို AGTV သာ. ကောင်း၏ရိုက်ကူးမှုအရည်အသွေးပေး
AGTV ကိုအသုံးပြု Blackmagic ဒီဇိုင်းURSA Broadcasting ကင်မရာများသည်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးကိုရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးများတွင်ထည့်သွင်းရန်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောဘတ်ဂျက်ကိုဆက်လက်ထားရှိရန်ဖြစ်သည်။ URSA ထုတ်လွှင့်သည့်ကင်မရာခြောက်လုံးကိုအုပ်စုနှစ်စု ခွဲ၍ စတူဒီယိုတွင်ကင်မရာသုံးခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းသုံးခြင်းဖြင့်မြင်ကွင်းများကိုတစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့သည်။ ဤသည် reshoot ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူ set ကိုအပေါ်သရုပ်ဆောင်တွေကနေကွဲပြားခြားနားသောထောင့်များနှင့်တုံ့ပြန်မှုဖမ်းယူစေ၏။ ယူနစ် ၂ ကို“ ဆုပ်ကိုင်။ သွားရန်” အတွက်အသုံးပြုသည်၊ ကင်မရာများ၏ဘက်ထရီများကိုအမြဲတမ်းအားသွင်းနေပြီးထိုအရာကသင်္ဘောသားများအားပြင်ပမြင်ကွင်းများကိုရိုက်ကူးရန်လိုအပ်သလိုသူတို့ကိုဖမ်းရန်နေရာပေးသည်။
အဆိုပါသင်္ဘောသားအပြည့်အဝ 4K အတွက်ရိုက်ကူးဖို့ URSA အသံလွှင့်ရဲ့စွမ်းရည်အဖြစ်က၎င်း၏ကြွယ်ဝသောအရောင်အဆင်းနဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားစွာပုံရိပ်တွေအသုံးပြုသွားမည်။ အဆိုပါသင်္ဘောသားကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ ATEMအရောင်ချိန်ခွင်လျှာ, shutter speed နှင့်ထို့ထက် ပို. စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ချိန်ညှိကူညီပေးခဲ့သည်တဲ့ကင်မရာကို control panel ထဲကရှိခြင်းအတွက်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်စဉ်အတွင်းအမှုထမ်းများအတွက်အများဆုံးထိရောက်မှုများကိုကူညီပေးခဲ့သရာ။
URSA အသံလွှင့်ကင်မရာနှင့် ATEM တစ်ဦးက Flexible သေနတ်ပစ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးကူညီပေးခဲ့
သုံးပြီးအပြင် Blackmagic ဒီဇိုင်း'' s ကို URSA အသံလွှင့်ကင်မရာများ, AGTV ကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို Pro ကို HD ကို နှင့် ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု Switcherတစ်ဦး HyperDeck စတူဒီယို Mini ကိုအသံဖမ်း အပိုဆောင်းမှတ်တမ်းတင်ဘို့ကင်မရာယူနစ်, တစ်ဦးနှစ်ဦးစလုံးအတှကျ SmartScope Duo 4K မော်နီတာနှင့်တစ်ဦး ATEM Talkback Converter 4K သော URSA ထုတ်လွှင့်မှမိမိတို့တစတစဝေးကွာနေစဉ်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိနေဆဲမှအော်ပရေတာ enabled ။ ဒါကပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာမပြတ်မတောက်အရေးယူဘို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
မည်သို့ပိုမိုသိရှိလိုပါက Blackmagic ဒီဇိုင်း ဂီယာအားဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့သည် AGTV "နဲ့တူအကြီးအရုပ်မြင်သံကြား hits ၏ထုတ်လုပ်မှုတွင်a la Catalan Amoreထို့နောက် 'ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ.
AGTVala Catalan Amore ATEM ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို Pro ကို HD ကို Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ တူးမြောင်း 13 FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor HyperDeck စတူဒီယို Mini ကိုအသံဖမ်း SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံနှင့်မြှား တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် URSA အသံလွှင့်ကင်မရာ URSA ထုတ်လွှင့် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-10-03
ယခင်: သူဟာ Emmy-အနိုင်ရအိုင်ပီပို့ဆောင်ရေး Solutions ဆွေးနွေးဖို့ Zixi
နောက်တစ်ခု: @ ကိုရှင်းလင်းရန်-Com အမေရိကန် FreeSpeak Edge #AES နှင့် #NABShowNY 2019 ၏ပွဲဦးထွက် Presents